ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ဓာတ်ပုံများ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဝန်ဆောင်မှု, ဝန်ဆောင်မှု, ချိုးကွေ့
STSI, ပညာရေး, အခွင့်အရေး
ဖျော်ဖြေပွဲ, ပြပွဲ, ဖျော်ဖြေပွဲ
လူ့အဖွဲ့အစည်း, နိုင်ငံရေး, မီဒီယာ
horoscopes, မှော်, ကံဇာတာပြောရာမှာ
ဒုတ်, Dance ကလပ်
Real Estate အိမ်ခြံမြေ
ဆရာဝန်တွေ, ဆေးခန်း, အာမခံ
ချိန်းတွေ့, ချစ်ခြင်း, ဆက်ဆံရေး
မင်္ဂလာဆောင်, မင်္ဂလာဆောင်, အိမ်ထောင်ရေး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း & ဘဏ္ဍာရေး
စာရင်းကိုင်, စာရင်းစစ်, အခွန်
သိပ္ပံ, နည်းပညာ, ဘာသာစကားများ
အမြဲတမ်း, Real Estate
မြေပုံများ, ပို့ဆောင်ရေး, GPS,
ရာသီဥတု, မိုးလေဝသ, အချိန်ဇုန်
စားသောက်ဆိုင်များ, Café, ဘား
HR ဌာန, HR
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း & ဟော်ရီကာချာ
မိသားစု, အိမ်, ကလေးများ
အလှအပနှင့် Spa မ်ား
ရေချိုး, အနှိပ်ခန်း, ကြံခိုင်ရေး
Kak Photoshop မှာနောက်ခံမပါဘဲပုံဖြစ်စေအပ်သလော ဖိုင်ကို .png? သငျသညျခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းကိုရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါအသစ်ကပေါ့
အပေါ် Posted 02.09.2018
Photoshop တွင်နောက်ခံမရှိဘဲပုံတစ်ခုကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ .png ဖိုင်လား။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ချင်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပါ။ တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပါ - ၎င်းသည်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်သင်ခန်းစာများတွင်ပါ။ ဒီမှာစကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့် ...
တစ်ပွင့်လင်းနောက်ခံနှင့်အတူဓာတ်ပုံကိုသိမ်းဆည်းရန်အဘယ်အရာကို format နဲ့? အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှပွင့်လင်းနောက်ခံဖြစ်လာခဲ့သည်?
ပွင့်လင်းသောနောက်ခံဖြင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုမည်သည့်ပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းရမည်နည်း။ site ပေါ်တွင်ပွင့်လင်းနောက်ခံနှင့်အတူဓာတ်ပုံလုပ်!! သူတို့အားလုံးဟာသိပ်ကိုထူးချွန်တယ်၊ သူတို့က PNG or GIF မှာမသိမ်းဘူး။
အိမ်တွင်ဓါတ်ပုံရိုက်ရန်နောက်ခံမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ သင်အိမ်၌ရှိလျှင် Photoshop ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သင်လိုအပ်တာကဘာလဲ၊ နောက်ခံပေါ်မူတည်တယ်။ စာရွက်သည်လုံးဝစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်မဟုတ်၊ အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးမဟုတ်ပါ။ အထည်တွေရှိတယ် ...
ဓာတ်ပုံဆရာ, JPEG မှပြောင်းရိုးရှင်းစွာပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ NEF ဖိုင်အဖြစ်, ရှင်းပြကျေးဇူးပြုပြီး?
အပေါ် Posted 02.09.2018 19.09.2018
ဓာတ်ပုံဆရာများ၊ ကျေးဇူးပြု၍ NEF file တစ်ခုကို JPEG သို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်းပြပါ။ ACDSEE viewer ကို အသုံးပြု၍ အရိုးရှင်းဆုံး option ကိုရရှိနိုင်ပြီးရိုးရိုးလေးပါ။ FastStone Image Viewer အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ဒီဟာ ... နေဆဲ
Adobe Photoshop CS4 ရှိ“ Camera RAW” တွင် JPG ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
Adobe Photoshop CS4 တွင်“ Camera RAW” တွင် JPG ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။ FS ဖွင့်သောအခါ File menu မှ Open As .. ကိုရွေးချယ်ပါ။ အောက်ခြေရှိ Extensions menu တွင် RAVy ကိုရွေးပြီး Jepeg ကိုဖွင့်ပါ။ ဖွင့်လိမ့်မယ် ...
အပေါ် Posted 01.09.2018
Photoshop မှာအဖြူရောင် Background ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ! ! ဒါပေမယ့်ခွင့်လွှတ်ပါ၊ ငါမင်းကိုကိုးကားမှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းကရိုင်းစိုင်းတယ်၊ သငျသညျဤလမ်းပြုမူလို့မရဘူး, ဒါကြောင့်အသားတင်နှင့်ပြက်လုံးသည်သူ၏ ...
Photoshop မှာအဖြစ်ကိုထိန်းညှိဖို့အစာအိမ်, တင်ပါးနှင့်ခြေထောက်များဖယ်ရှားပစ်ရန်။
Photoshop ရှိအစာအိမ်၊ ဘေးနှင့်ခြေထောက်များကိုဖယ်ရှားနည်း။ Liqyify (ပလပ်စတစ်) နှင့်ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။ ဤစစ်ထုတ်ခြင်းသည် "ပစ္စည်း" ကိုသာပျက်ပြားစေပြီးအလိုရှိသည့်ရလဒ်ကိုမဖော်ပြပါ။ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုမမြင်ရပါ။ ငါမီးမောင်းထိုးပြ ...
Photoshop မှာ texture လျှောက်ထားရန်ကဘယ်လို ???
Photoshop တွင် texture ကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲ ??? သင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည် - gt; သူတို့ကို Photoshop မှာဖွင့်ထားတယ် - gt; ဓာတ်ပုံနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော gt; ဓာတ်ပုံကိုဆွဲယူပါ - gt; နှင့် 10 layer ကနေ texture အလွှာရဲ့ပွင့်လင်းပြောင်းလဲပစ်
ကဲ့သို့, မိမိမကျြနှာကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဓာတ်ပုံများတွင်တတ်နိုင်သမျှအများကြီးဆွဲဆောင်မှုမျက်နှာ, အပြုံးမျက်နှာ .. ?
သင်၏မျက်နှာကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊ အပြုံးများဖြင့်မည်သို့ဖုံးအုပ်နိုင်မည်နည်း။ သင်သည် Photoshop နှင့်မိတ်ဆွေမဟုတ်လျှင်အရိုးရှင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာ PIXELIZATION ဖြစ်သည်။ ဥပမာ IrfanView (လုံးဝအခမဲ့ - irfanview.com - နှင့်ဘာသာစကားနှင့်ပလပ်ဂင်များ ... )
နောက်ကျော burner အပေါ်အလွှာထားရန်ကို Photoshop ထဲမှာရှိသကဲ့သို့?
Photoshop ထဲကို layer တစ်ခုကိုဘယ်လိုယူမလဲ? သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအလွှာများကိုစီစဉ်ရန် layer menu ကိုသာအသုံးပြုပါ။ အလွှာပြတင်းပေါက်ရှိမျက်နှာဖုံးကိုအောက်ခြေသို့ဆွဲချလိုက်ပါ။
အဘယ်အရာကို program နဲ့သင်ဤတူသောသူတဦးသို့အများအပြားဓာတ်ပုံများပေါင်းစပ်နိုင်သလဲ
အပေါ် Posted 18.11.2017 19.09.2018
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်ဤကဲ့သို့သောဓါတ်ပုံများကိုပေါင်းစပ်ရန်မည်သည့်အစီအစဉ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သနည်း။ ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသော collage လုပ်ဖို့နေရာများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါ Picasa အကြံပြုပါသည်။ အဆင်ပြေသောရုရှားပရိုဂရမ်ကိုတစ်မိနစ်အတွင်းအခမဲ့ download လုပ်သည်။ အကယ်၍ …
"NEF" ဖိုင် ဘယ်လို dibble အမျိုးအစားကို? ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရမလဲ ?? Photoshop မရှိပါ။ မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုပြောင်းရန်လဲ။
အပေါ် Posted 18.11.2017
"NEF" ဖိုင် ဘယ်လို dibble အမျိုးအစားကို? ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရမလဲ ?? Photoshop မရှိပါ။ မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုပြောင်းရန်လဲ။ NEF Codec သည် Nikon RAW ပုံရိပ်ဖိုင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသော module တစ်ခုဖြစ်သည်။
pliz ငါ့ကို pixels ကို in ဓာတ်ပုံအရွယ်အစားနှင့် 10H15 15H18 ပြောပြ
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကို 10x15 နှင့် 15X18 ရှိဓာတ်ပုံအရွယ်အစားကိုပြောပါ။ ဒီအပြစ်တင်ခံရတဲ့အရင်းရှင်စက်တွေကစင်တီမီတာဆိုတာဘာနားမလည်ဘူး။ ထို့ကြောင့်ပုံပျက်မပါဘဲပုံနှိပ်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည်လက်မ (သို့) တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ဂူဂဲလ်တွင်အခမဲ့ picas ပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိသည်။ ပြproblemsနာမရှိသောအရာများရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ မည်သည့်ပရိုဂရမ်တွင်၊ မည်သည့်စတုရန်းမီတာ (၁၀၀) မဆိုကင်မရာဖြင့်၊ Photoshop၊ လျှောက်လွှာနှင့်…
ဓာတ်ပုံအဟောင်းမှခြစ်ရာများကိုဖယ်ရှားရန်အွန်လိုင်းပရိုဂရမ်များကဘာတွေလဲ။ ငါလူကြိုက်များသောပရိုဂရမ်များစွာကိုကြိုးစားခဲ့သည်၊ သူတို့အားလုံးသည်မျက်နှာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အခြားရှုပ်ထွေးသောခြစ်ရာများကိုဖယ်ရှားပစ်မည့်အစား ... တကယ်အလုပ်မဖြစ်ပါ။
9 12 မှဓာတ်ပုံ format နဲ့ဘယ်နှစ်ယောက် pixels ကိုအလွန်အရေးတကြီး9မှ 12 အတွက်လိုအပ်သောဓာတ်ပုံကို format ကိုလိုအပ်တယ်
ဓာတ်ပုံ ၉-၁၂ ရှိ pixel ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ဤဓာတ်ပုံပုံစံတွင်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပုံအတွက် ၉-၁၂ ပုံအရ ၇၂ ပုံအရပုံကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေသည်။ ဤပုံသဏ္Maybeာန်ပုံ၏အရည်အသွေးသည် ... ဘယ်လောက်များများ ...
geolocation သည် Instagram ပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ gps နှင့် wi-fi ကိုဖွင့်ထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားသောအခါ "နေရာမတင်နိုင်ပါ"
Geolocation သည် instagram တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ gps နှင့် wi-fi ကိုဖွင့်ထားပါသည်။ သို့သော်တည်နေရာကို တင်၍ မရပါကရေးသားရန်ကြိုးစားသောအခါ GPS (Global Positioning System သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်နေရာပြစနစ် (GPE မှဖတ်သော GPE) ဂြိုလ်တု ... ...
JPEG, ရန် RAW format နဲ့ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုလွှဲပြောင်းရန်မည်သို့မည်ပုံ
RAW မှ JPEG သို့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ RAW မှ JPEG သို့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို Home Photo Studio ပရိုဂရမ်နှင့်အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ပရိုဂရမ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော link မှာဤတွင်ပါ။
အိမ်မှာဒေါ်လာစျေး print ထုတ်လုပ်နည်း
အိမ်တွင်တစ်ဒေါ်လာကိုမည်သို့ပုံနှိပ်မည်နည်း။ ပုံနှိပ်ခြင်းအပြင်အကာအကွယ်မည်မျှရှိသည်ကိုသင်အနီးကပ်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငွေကိုပရင်တာပေါ်တွင်“ letterpress” ဖြင့်ပုံနှိပ်ထားသည်။ သင်၏ညီငယ်ကိုသာအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။
ဘယ်မှာဖွင့်လှစ်မပေး built cs5 ရုရှား, များအတွက်သီးခြားကင်မရာရော်ကိုဒေါင်းလုဒ်။
သီးခြားဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ကင်မရာ Raw အား cs5 ကိုရုရှားဘာသာဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ချပြီးပါက built-in မဖွင့်ပါ။ Photoshop Edit-Preferences-FileHandling- (CameraRawPreferences) - နောက်ဆက်တွဲ "Supported Camere RAW Files များအတွက် Prefer Adobe Camera Raw" ဘေးရှိအကွက်ကို check လုပ်ပါ။ - Edit - Preferences (preferences) -Processing ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ5Next ကို 's Page
© Copyright 2017 - 2021 အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,994 စက္ကန့်ကျော် Generate ။